Zvikanganiso Zvakaonekwa mufaira
musha Products DataNumen Outlook Repair Zvikanganiso zvakaonekwa mufaira xxxx.pst…
Ruzivo rwakadzama nezve "Zvikanganiso Zvaonekwa muFaira" Kanganiso
Kana uchivhura yakakuvadzwa kana yakashata Outlook PST faira neMicrosoft Outlook, unoona inotevera meseji yekukanganisa:
uko 'xxxx.pst' izita reiyo Outlook PST faira inovhurwa.
Pazasi pane muyenzaniso skrini yeiyo mhosho meseji:
Iyo PST faira inoumbwa nezvikamu zviviri, iyo faira musoro, uye inotevera data chikamu. Musoro wefaira une most ruzivo rwakakosha nezve iyo faira rese, senge siginecha faira, saizi refaira, kuenderana, nezvimwe.
Kana Microsoft Outlook iri kuyedza kuvhura faira, inotanga kuverenga chikamu chemusoro uye kuongorora ruzivo rwayo, semuenzaniso, siginecha faira pamwe neruzivo rwekuenderana. Kana iko kuongorora kukakundikana, inozivisa iyo "Iyo faira xxxx.pst haisi yefaira remafaira." kukanganisa. Zvikasadaro, inoenderera ichirava iyo yasara dhata chikamu uye kana paine chero zvikanganiso muchikamu ichocho, ichataura kukanganisa kwataurwa pamusoro, uye kukuudza kuti ushandise iyo Inbox yekugadzirisa chishandiso (Scanpst.exe) kuzvigadzirisa.
Asi zve most mhosva, scanpst haigone kugadzirisa iko kukanganisa, uye unofanirwa kushandisa chigadzirwa DataNumen Outlook Repair kugadzirisa iyo yakaipa PST faira uye kugadzirisa dambudziko.
Iwe unogona zvakare kuona iyi kukanganisa paunenge uchishandisa Outlook 2002 kana yakaderera vhezheni uye iyo PST faira inosvika kana kupfuura iyo 2GB saizi saizi muganho. Kana zvirizvo, chete DataNumen Outlook Repair inogona kukubatsira iwe.
Semuenzaniso yakashata PST faira inokonzeresa iko kukanganisa. Outlook_2.pst
Iyo faira yakadzorerwa ne DataNumen Outlook Repair: Outlook_2_fixed.pst
"Iyo faira xxxx.pst haisi yefaira remafaira." kukanganisa.